တောင်အာဖရိကလွှတ်တော်အဆောက်အဦ မီးရှို့မှု သံသယတရားခံကို “အကြမ်းဖက်မှုဥပဒေ” ဖြင့် ထပ်မံ တရားစွဲ - Xinhua News Agency
အကြမ်းဖက်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသော Zandile Christmas Mafe တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ကိပ်တောင်းမြို့ရှိ တရားရုံးချုပ်သို့ရောက်ရှိလာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကိပ်တောင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ပါလီမန်လွှတ်တော်အဆောက်အဦအား ဆိုးဆိုးရွားရွား မီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးစေခဲ့သည့် မီးရှို့မှုသံသယတရားခံ ကိပ်တောင်းမြို့သားတစ်ဦးကို “ အကြမ်းဖက်မှုဥပဒေ”ဖြင့် တောင်အာဖရိကအစိုးရရှေ့နေရုံးက ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနေသော တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ကိပ်တောင်းမြို့ရှိ ပါလီမန်လွှတ်တော်အဆောက်အဦအား မီးသတ်သမားများက မီးငြှိမ်းသတ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် Zandile Christmas ဆိုသူကို ပိုင်နက်ကျူးလွန်ကာ ပစ္စည်းခိုးယူရန် ကြံစည်မှု ၊ မီးရှို့မှု -၂ မှု ၊ ဖောက်ခွဲရေးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှု စသည်တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
တရားလိုအစိုးရရှေ့နေဘက်က လိုအပ်ချက်ကြောင့် တရားခွင်အား ၇ ရက်ကြာ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက် ကိပ်တောင်းမြို့ရှိ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံး၌ Mafe ၏ အမှုကို ဒုတိယအကြိမ် ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွင် အစိုးရရှေ့နေရုံးက “ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ဒီမိုကရေစီကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုများ ဟန့်တားရေးဥပဒေ” ကို တင်သွင်းလာခဲ့ကြောင်း နှင့် တနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်မှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့စေလွှတ်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ယင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သံသယတရားခံမှာ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသူသည် “ ဥပဒေနှင့်မညီပြုမူခြင်း နှင့် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် လူသေစေနိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းကိရိယာများကို အများပြည်သူသွားလာရာနေရာ ၊ နိုင်ငံပိုင် သို့မဟုတ် အစိုးရပိုင်အဆောက်အဦတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြေခံအဆောက်အဦတစ်ခု ၊ လွှတ်တော်အနီး သို့မဟုတ် လွတ်တော်၌ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ပေးပို့ခြင်း ၊ ထုတ်လွှတ်ခြင်း ၊ နေရာချထားခြင်း လုပ်ဆောင်သည်မှာ ထင်ရှား ပေါ်ပေါက်ကြောင်း” ဟူ၍ တရားစွဲဆိုမှုတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
လျှောက်ထားချက်အရ ဆေးရုံတစ်ခုတွင် Mafe ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက် နောက်တစ်ကြိမ်ရုံးချိန်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်အထိ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော်လည်း ရှင်းလင်းမှုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရှေ့နေချုပ်ရုံးပိတ်ထားရသဖြင့် ရုံးချိန်းရက်မသတ်မှတ်ရသေးမီမှာပင် အာမခံလျှောက်ထားမှုကို တရားခံဘက်က တင်သွင်းရန် စီစဉ်ထားကြောင်း တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ နိုင်ငံတော် တရားစွဲဆိုမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့(NPA) ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Eric Ntabazalila က တရားရုံးအပြင်ဘက်တွင် သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်အာဖရိကပြည်တွင်း ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် eNCA ချန်နယ်နှင့် သီးခြားပြုလုပ်သော တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုတွင် Ntabazalila က အစိုးရရှေ့နေရုံးအနေဖြင့် ပါလီမန်လွှတ်တော်အတွင်း Mafe ၏ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို ကြည့်ရှုအကဲဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် သူ့အား “ ပါလီမန်လွှတ်တော်အဆောက်အဦအား ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရန် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း-အကြမ်းဖက်မှုဥပဒေ” ဖြင့် ထပ်မံတရားစွဲဆိုသွားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် အကြောင်းပြချက်သည် အာမခံလျှောက်ထားမှုစတင်ပြီးနောက်တွင် တရားရုံး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအစီအစဉ်ကို Mafe အနေဖြင့် နားလည်နိုင်စွမ်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိမရှိ နှင့်ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းဆုံးဖြတ်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်း ကဆိုသည်။
အိမ်ခြေရာခြေမဲ့တစ်ဦးဖြစ်သူ Mafe အား ဖမ်းဆီးမှုကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် လူပေါင်းများစွာ တရားရုံးအပြင်ဘက်၌ စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ယင်းတရားစွဲဆိုမှုမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ဖုံးကွယ်ပစ်ရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှတ်တော်အဆောက်အဦထဲ ဝင်ရောက်ကာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ခိုးယူမှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် Mafe အား ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုသည် ဇန်နဝါရီ ၂ မှ စတင်ကာ နာရီပေါင်း ၇၀ ထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီး (အောက်လွတ်တော်) ၊ တောင်အာဖရိကလွှတ်တော်(NA) အဆောက်အဦတစ်ခုလုံး ဆိုးဆိုးရွားရွာ မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်း နှင့် ရာစုနှစ်နှင့်ချီ သက်တမ်းရှိ (အထက်လွှတ်တော်) အမျိုးသားကောင်စီအဆောက်အဦများလည်း မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနေစဉ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် ကနဦးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များဖော်ပြပါရှိသည့် ကိပ်တောင်းမြို့မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ထံမှ မီးလောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို တောင်အာဖရိကပါလီမန်လွှတ်တော်က ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ယင်းမှာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းအရင်း နှင့် အခြေအနေတစ်ခုလုံးကို ကောက်ချက်ချနိုင်ရန် “ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ” ပြည့်စုံလုံလောက်မှုရှိသေးကြောင်း မီးသတ်ဌာနက ဆိုသည်။(Xinhua)
South African parliament fire suspect faces additional charge of “terrorism act”
CAPE TOWN, Jan. 12 (Xinhua) — South African prosecution has addedacharge of “terrorism act” toaCape Town man who is suspected of setting fire to Parliament, which eventually gutted parliament buildings, the court heard on Tuesday.
In Mafe’s second appearing at Cape Town Magistrates’ Court aftera7-day postponement required by the prosecution, it was heard that the prosecution addedacount in terms of the Protection of Constitutional Democracy Against Terrorist and Related Activities Act, and that the accused was diagnosed of paranoid Schizophrenia after being sent for mental observation by the State last Monday.
The accused “did unlawfully and intentionally deliver, place, discharge or detonate an explosive or other lethal devices in, into or againstaplace of public use,astate or government facility, or an infrastructure facility, at or near Parliament, upon or about Jan. 2,” read the charge sheet.
Inaseparate live interview with local TV channel eNCA, Ntabazalila said the prosecution decided to add the charge of “terrorism act with using explosives to destroy the parliament” after viewingafootage showing Mafe’s presence in the parliament.
The Parliament receivedafire and safety report of Cape Town Fire and Rescue Services last Thursday, which contains preliminary observations of the firefighters during the course of their work, but said it “does not in any way” purport to provide conclusive findings and evidence regarding the cause and the circumstances surrounding the fire.
Photo (1,2) Zandile Christmas Mafe (C) appears at Cape Town Magistrates’ Court in Cape Town, South Africa, on Jan. 11, 2022. (Xinhua/Lyu Tianran)
Photo (3) Smoke rises as the fire flares up again on the National Assembly building in Cape Town, South Africa, on Jan. 3, 2022. (Photo by Xabiso Mkhabela/Xinhua)